moi: Less income for bus lines in Buthidaung and Maungtaw
Less income for bus lines in Buthidaung and Maungtaw
In the early morning of 17th November, we visited the inspection toll gate at the exit of town, where we found passenger buses from Maungtaw to Buthidaung, Cargo Trucks, 3- wheel vehicles passing through the toll gate. Passengers and drivers said they got less income due to less people travelling and they all wish for peace to be established rapidly in their region.
“I just started my bus run today. I came here from Buthidaung and I will run only one time today. I had to carry rice and charcoal due to the few passengers in our car. Our income is 10,000 or 15,000 Kyats per route. Previously, we got 30,000 or 40,000 Kyats per route. Altogether 30 buses are running on Buthidaung- Maungtaw road” said driver Ko Ye Htun Aung.
“I got only6passengers in my Express bus. They all are men. We collect 1,000 or 1200 Kyats forapassenger depending on the distance. Now, we will run back from Maungtaw to Buthidaung. We left Buthidaung in the morning. My native town is NgaKhuya village. My parents are retired Government service personnel and my sisters are teachers. We will go back to our home depending on the security conditions in the area. This is my own bus. I possess 10 express buses” said local, Zin Ko Nyein.
“Since early morning, I left for Maungtaw carrying vegetable sellers from the villages. They sell their local vegetables such as beans, pumpkins, chilies and egg plant to the town dwellers in Maungtaw. I collect 600 Kyats per round trip forapassenger. I earn 8,000 or 9,000 Kyats per day. Previously, I got more income due to carrying goods on the return trip. Our region is close to town andalittle bit peaceful. That’s why, I can run my bus daily” said 3- wheel vehicle driver Ko Kyaw Hla Thein from Lay Mile Magyigone village.
“I’m here to sell my local vegetables and rice in the town. I have less demand than before. I bought some necessary things from town for my house on my return trip. Our region is more peaceful and stable than the northern part of Rakhine State” said Daw Mya Hnit of Thone Mile Tharsi village.
မောင်တော-ဘူးသီးတောင် ယာဉ်လိုင်းများ ခရီးသည်နည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်း၊ အမြန်တည်ငြိမ် အေးချမ်းစေရန် ဒေသခံများ ဆန္ဒရှိနေ
မောင်တော နိုဝင်ဘာ ၁၇
မောင်တောမြို့အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ခေတ္တဝင်ရောက် လေ့လာရာ မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်ပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ ကုန်ကားများ၊ ကျေးရွာများမှ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လာကြသည့် သုံးဘီးယာဉ်များ မပြတ် ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ယခင်ကထက် သွားလာမှုနည်းပါး သေးကြောင်း၊ ဝင်ငွေလည်း နည်းပါးသွားကြောင်းနှင့် အမြန်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ခရီးသွားများ၊ ယာဉ်မောင်းများက ပြောပြသည်။
ဟိုင်းလတ်ခရီးသည်တင်ယာဉ်မောင်း ကိုရဲထွန်းအောင်က '' ဒီနေ့မှ ကျွန်တော်က ပြန်ပြေး ဆွဲတာပါ။ ကျွန်တော် အခု မနက် ဘူးသီးတောင်ကနေ ထွက်လာတာပါ။ ဒီနေ့တစ်ခေါက်ပဲ ဆွဲဖြစ်မှာပါ။ ခရီးသည်က အရင်လောက်မများတော့ ‘ဒီတစ်ခေါက် တောင် ဆန်နဲ့ မီးသွေးတင် လာရပါတယ်။ တစ်ခေါက်ကို ငွေကျပ်တစ်သောင်း၊ တစ်သောင်းခွဲလောက်ပဲ ရပါတယ်။ အရင်က တော့ တစ်နေ့ကို ငွေကျပ် သုံးလေး ငါးသောင်းအထိ ရပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် - မောင်တော ပြေးဆွဲတာက စုစုပေါင်း ယာဉ်အစီး ၃ဝ လောက် ရှိပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
''ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မှန်လုံကားမှာ ခရီးသည် ခြောက်ယောက်ပဲ ပါပါတယ်။ အသွား အလာနည်း ကြသေးပါတယ်။ အခုပါလာတဲ့ ခရီးသည်တောင် အမျိုးသားတွေချည်းပါ။ တစ်ယောက်ကို ခရီးစဉ်အပေါ် မူတည်ပြီး ငွေကျပ် ၁ဝဝဝ- ၁၂ဝဝ ယူပါတယ်။ ကျွန်တော် က အခု မောင်တော ကနေ ဘူးသီးတောင်ကို ပြန်မှာပါ။ မနက်က ဘူးသီးတောင်ကနေ ထွက်လာတာပါ။ ကျွန်တော်က ငါးခူရ ဇာတိပါ။ မိဘတွေက ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားတွေ ဖြစ်ပြီး အစ်မတွေက ကျောင်းဆရာမပါ။ ငါးခူရကို နယ်မြေအခြေ အနေအပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်သွားမှာပါ။ ‘ဒါက ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ကားပါ။ ‘ဒီလို မှန်လုံယာဉ်ခရီးသည်တင် အမြန်ယာဉ် ၁ဝ စီးလောက်ရှိပါတယ်'' ဟု ကိုဇင်ကိုငြိမ်းက ပြောသည်။
လေးမိုင် မကျီးကုန်းကျေးရွာမှ သုံးဘီးယာဉ်မောင်း ကိုကျော်လှသိန်းက '' ဒီနေ့ နံနက် စောစော ကတည်းက ရွာက ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းဝယ်မယ့်သူတွေနဲ့ မောင်တောကို တက်လာတာပါ။ ပဲ၊ ဖရုံ၊ ငရုတ်၊ ခရမ်းသီး စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ရွာကနေ ‘ဒီမှာ လာရောင်းတာပါ။ အသွားအပြန် တစ်ယောက်ကို ငွေကျပ် ၆ဝဝ ယူပါတယ်။ တစ်နေ့ ဆီဖိုးနုတ်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ငွေကျပ် ၈ဝဝဝ၊ ၉ဝဝဝ လောက်တော့ ကျန်ပါတယ်။ အရင်ကဆို မြို့ပေါ်အပြန် ကုန်လည်းပါတော့ ဒီထက် ပိုက်ဆံပိုရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသက မြို့နဲ့လည်းနီးပြီး အထိုက် အလျောက် အေးချမ်းမှုရှိတာမို့ နေ့တိုင်း ပြေးဆွဲပေးပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
''ကျွန်မက ရွာမှာ စိုက်ပျိုးတဲ့ အသီးအနှံတွေနဲ့ စပါးလေးနည်းနည်း မြို့ပေါ် သွားရောင်းတာပါ။ အရင်ကလို ရောင်းမကောင်းသေးပါဘူး။ စပါးဈေးကလည်း အရင်လို မဟုတ်ဘူး။ အပြန်မှာ မြို့ပေါ်က အိမ်မှာ လိုတဲ့ပစ္စည်းလေး နည်းနည်းပြန် ဝယ်လာ ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဒေသမှာ ဟိုမြောက် ပိုင်းဒေသ တွေလို မဟုတ်ပါဘူး။ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ'' ဟု သုံးမိုင်သာစည်ကျေးရွာမှ ဒေါ်မြနှစ်က ပြောသည်။
သတင်း-ကိုသက်နှင့် အဖွဲ့၊ “ဓာတ်ပုံ - မင်းထက် ၊ ဖိုးထောင်